Zandarimariam-pirenena : mpiadina ho zandary roa namoy ny ainy | NewsMada
Zandarimariam-pirenena : mpiadina ho zandary roa namoy ny ainy
Mpianatra ho zandary roa indray namoy ny ainy tamin’ny fihodinana faharoa amin’ny fifaninanana hidirana ho mpianatra ho zandary tao amin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena Ambositra, ny zoma 14 avrily 2017 lasa teo…
Notanterahina nanomboka ny 10 avrily 2017 lasa teo ny dingana faharoa amin’ny fifaninanana hidirana ho isan’ireo 1 200 mianadahy ao anatin’ny andiany faha-73-n’ny mpianatra ho zandary. Ao amin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena Ambositra ny nanatontosana izany ka ho an’ireo afaka tamin’ny dingana voalohany no miatrika indray ity dingana faharoa ity. Ny zoma teo tamin’ny 10 ora sy 30 mn nandritra ny taranja hazakazaka, mpifaninana iray tsy nahatsiaro tena rehefa nahavita ny halavirana 1 000 metatra. Nalefa tao amin’ny hopitalin’Ambositra avy hatrany izy taorian’ny fizahana nataon’ny fizahana nataon’ny dokotera teo an-kianja. Nanao izay ho afany ny mpitsabo tamin’ny famonjena azy, saingy tsy avotra intsony ny ainy tamin’ny 12 ora antoandro. Mpiandina lehilahy iray hafa namoy ny ainy tao amin’ny hopitalin’Ambositra ihany koa taorian’ny hazakazaka 1 000 metatra na efa nanaovana famonjena rehetra aza teo an-kianja sy teny amin’ny hopitaly.
Nohazavain’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa rehefa nozahana ny anton’ny fahafatesan’izy roa lahy ireo, hita fa noho ny fanehoan-kery diso tafahoatra izay tsy eran’ny aina, noho ny ezaka tafahoatra loatra tsy voalanjalanja mba ho afaka amin’ny fifaninanana. Dokotera miisa dimy sy mpitsabo mpanampy maro no eo an-kianja mandritra ny adina. Manaraka ny fitsipika mifehy toy ny amin’ny fanadinam-panjakana BEPC na BAC ny fitsipiky ny adina ara-panatanjahantena, raha ny fanazavana voaray hatrany.
Miisa 162 ireo efa niala tamin’ireo 1 564 tany am-boalohany ka 1401 sisa afaka nifaninana ka amin’ireo no hakana ireo mpianatra ho zandary miisa 1 200.